Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ee Telesom oo Abaal-marino guddoonsiisay Macaamiisha Ku Guulaysatay Abaal-marinaha Bishii April – WARSOOR
Munaasibadan waxaa ugu horayn ka hadlay madaxa laanta Suuq-gaynta ee shirkadda Telesom Md. Muuse Siciid Maxamed waxaanu ka warbixiyey abaal-marinaha shirkaddu guddoonsiisay macmiisheeda, waxaanu yidhi, “Barnaamijka aynu maanta u fadhino wuxuu ka kooban yahay, saddex barnaamij oo kala duwan oo mid walba ay shirkaddu ku bixiso abaal-marino. Kow waxaa ka ah barnaamijka Hano Hadyaddaada oo macaamiisha moobaylkooda ka isticmaasha internet-ka oo qof kasta oo macmiil u ah shirkadda TELESOM oo internet-ka isticmaala moobaylkiisa waxa uu awood u leeyahay inuu barnaamijkaa ka soo qayb-galo, nasiibkiisana tijaabiyo. Barnaamijka labaad waxaa weeye Cimro oo ah barnaamij runtii aad iyo aad u qaaliya. Bilkasta waxay shirkaddu ugu talo-gashay inuu hal macmiil tago masjidul xaraamka, waana jaanis aad iyo aad u qaaliya runtii. Barnaamijka saddexaad ee soo raacaa waxaa weeye Aqoon-maal oo isagu runtii muddo badan soo jiray, oo isagana macmiil ka badan kontameeyo ay bil walba hadyaddo kala duwan ay ku guulaystaan”.
Munaasibadan waxaa isaguna ka hadlay maamulaha Waaxda Iibka ee shirkadda TELESOM Cabdiraxmaan Shaqale waxaanu dhammaan macmiisha Telesom uga mahadnaqay sida wanaagsan ee ay u isticmaalaan adeegyadda kala duwan ee shirkadda, hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa, “Ujeeddada aanu ka leenahay abaal-marinta macaamiisha TELESOM waxaa weeye in adeeggayaga TELESOM aad loo sii dhex galo oo aanu macmiishayadda ku soo dhawayno, oo macmiishayadu helaan jaanis ay ku baadhbaadhi karaan adeegayaga kala duwan iyagoo ku go’aan qaadanaya inay ku helaan hadyaddo ay shirkaddu ku siiso. Ta kale waxaa weeye in shirkadu ay suuqa gaadhsiiso in adeegyadaa ay shirkaddu hayso”.